Success Upsize | How to be successful in life. How to be happy. How to have good relationship. Love, Wealth, Health sharing place
MR. BEAN သင်ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ – အတွဲ ၂
May 6, 2017 Ko Thura Success Tips3comments
ပြီးခဲ့တဲ့ လက ကျွန်တော်တို့ Mr Bean ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများဆိုပြီး ရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူ တော်တော်များများက နောက်ထပ် အတွဲ ၂ ကို ဆက်လက်ရေးသားပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက် အခု အတွဲ ၂ကို ဆက်လက်ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ ရယ်မောရင်းနဲ့
အိပ်မက်စုဗူး – ၈ (ပျော်ရွှင်မှု)
April 30, 2017 Ko Thura Dream Bank Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်စုဗူးထဲ ထည့်လာခဲ့တဲ့ အိပ်မက် ကျပ်တန်လေးတွေ အတော်အသင့်ရှိလာပါပြီ။ ဒီစုဗူးလေးကို တကယ်ဂရုတစိုက်နဲ့ ဖြည့်လာတာဆိုရင်တော့ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ အိပ်မက်နဲ့ ပိုပြီး နီးကပ်လာမှာပါ။ အိပ်မက်တွေကို ကြိုးစားပြီး ဆောက်တည်နေချိန်မှာ ဒီအိပ်မက်တွေကို တကယ် ရှင်သန်ထမြောက်လာအောင်
ဘီလျံနာကြီး Richard Brason ရဲ့ အောင်မြင်ရေးသော့ချက် (၁၀) ချက်
April 22, 2017 Ko Thura Success Tips2comments
ဒီလတော့ Virgin Group ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ကုဋေကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့ Richard Branson ရဲ့ Interview တွေက ကောက်နှုတ်ချက် လေးတွေကို ပြန်လည် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Richard ဟာ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ၁၆ နှစ်သားကတည်းက
Mr. Bean သင်ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ – အတွဲ ၁
April 9, 2017 Ko Thura Success Tips5comments
ကျွန်တော်က Mr Bean ရဲ့ အသည်းစွဲ ပရိသတ် တဦးပါ။ သူ့ရဲ့ Series တွေအားလုံးကို အရမ်းကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ မကြိုက်တဲ့လူလည်း မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ သူဟာ တကယ်ကို ဟာသမြောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသတွေက
အိပ်မက်စုဗူး – ၇ (စိတ်ခွန်အား)
March 31, 2017 Ko Thura Dream Bank Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်စုဗူးကို လစဉ် ရေးသားလာတာ အခုဆိုရင် အတွဲ ၇ တောင် ရောက်လာပါပြီ။ တောက်လျှောက်ဖတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အတော့်ကို ခရီးပေါက်နေလောက်ပါပြီ။ လက်တွေ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်နေနိုင်ကြပါပြီ။ ရှေ့စာစောင်တွေ လွတ်သွားခဲ့ရင် ဒီအောက်က
အလုပ်တွေသူမတူ ပြီးအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
March 25, 2017 Ko Thura How to7comments
ရုံးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေများလို့ အရေးကြီးတာတွေ မေ့သွားဖူးလား? လုပ်စရာတွေ တပုံတပင်ရှိနေပေမယ့် တနေကုန်လို့ တခုမှ မယ်မယ်ရရမပြီးလိုက်တဲ့ အဖြစ်တွေရော ကြုံဖူးလား? ဒီလို ဖြစ်နေကျဆိုရင်တော့… ဒီ Post လေးကို အဆုံးထိ ဆက်လက် ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်.. ကြည့်ရအောင်
Jack Ma ရဲ့ အောင်မြင်ရေးသော့ချက် (၁၀) ချက်
March 9, 2017 Ko Thura Success Tips Leaveacomment
ဒီအပတ်တော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ Alibaba Group ရဲ့ CEO Jack Ma ရဲ့ အောင်မြင်ရေးသော့ချက်တွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ လုပ်သာလုပ်လိုက် Jack Ma ဟာ သူ့ရဲ့ တတိယအကြိမ် ကြိုးစားမှုအနေနဲ့ English
ဒီ ၆ ချက် ကြောင့် အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်မဖေါ်ဖြစ်တာ
March 4, 2017 Ko Thura How to, Success Tips Leaveacomment
လူတိုင်း အိပ်မက်ကိုယ်စီရှိပါတယ်… “ဒါဆို အကောင်အထည်ဖေါ်တော့လေ”လို့ ပြောရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်… အရင်းစစ်လိုက်လို့ ဘာ့ကြောင့် မလုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင် ကြောက်စိတ် ၆ ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်… ဒီ ၆ ချက်ကို ကျော်လွှားနိုင်လာရင် ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေ
အိပ်မက်စုဗူး – ၆ (မရှိမဖြစ် ငြင်းပယ်မှု)
March 1, 2017 Ko Thura Dream Bank Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်စုဗူးကို လစဉ် ရေးသားလာတာ အခုဆိုရင် အတွဲ ၆ တောင် ရောက်လာပါပြီ။ တောက်လျှောက်ဖတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အတော့်ကို ခရီးပေါက်နေလောက်ပါပြီ။ လက်တွေ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်နေနိုင်ကြပါပြီ။ ရှေ့စာစောင်တွေ လွတ်သွားခဲ့ရင် ဒီအောက်က
Ameer Rosic ရဲ့ အောင်မြင်ရေး သော့ချက် (၅) ချက်
February 26, 2017 Ko Thura Success Tips7comments
အခု ဒီတပါတ်ရဲ့ ဖတ်စရာအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ SuccessUpsize ရဲ့ ပင်တိုင်စာဖတ်မိတ်ဆွေ Subscriber တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Zum Zum ပေးပို့လာတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို အားလုံးဖတ်ရအောင် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Zum Zum က အောင်မြင်တဲ့လူငယ်စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင် Ameer Rosic
View SuccessUpsize’s profile on Facebook